UPDATE: Shabakad carruurta xadi jirtay kana ganacsan jiray oo lagu qabtay magaalada Muqdisho! | HalQaran.com
UPDATE: Shabakad carruurta xadi jirtay kana ganacsan jiray oo lagu qabtay magaalada Muqdisho!
Muqdisho (Halqaran.com) – Ciidamada Booliska dowladda Federalka Soomaaliya ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen Shabakad ka ganacsan jirtay iibinta carruurta, kaddib Hawlgal ballaaran oo ay sameeyeen.
Sida ay sheegtay Taliye Ku xigeenka Ciidamada Booliska Soomaaliya Zakia Huseen hawlgalkaasi waxaa fuliyay Ciidamada dambi baarista Booliska oo muddo bil ah ku daba joogay kooxdaasi.
Dadka la soo qabtay ayaa waxa ay gaarayaan 11 oo eedeysane oo 8 ka mid ah ay yihiin Haween, kuwaasi oo ka ganacsan jiray iibinta carruurta.
”Ciidanka Booliska gaar ahaan Hoggaanka Dambi Baarista ee CID ayaa soo qabtay shabakad ka ganacsata carruurta taas oo la daba joogay muddo hal bil waxaana howlgalkaas lagu soo qabtay 11 eedeysanayaal oo 8 ay yihiin haween.” Ayey tiri Zakia Xuseen.
Sidoo kale, ciidamada Booliska ayaa soo badbaadiyay 11 Carruur oo da,dooda u dhaxeyso 12 sano jir illaa 7 Bil jir kuwaasi oo la doonaayay in la iibsado.
“Waxeey ciidanka sidoo kale soo badbaadiyeen 11 caruur da’dooda u dhaxeysa 12 sano jir illaa 7 bil jir kuwaas oo ah beec-sugiyaal oo hada ay xanaaneenayaan ciidanka Booliska intii laga baadigoobaya waalidiintooda.” Ayey sii raacisay hadalkeeda Taliye Ku xigeenka Ciidanka Booliska.
dad caruurta xadi jiray
lagu qabtay Muqdisho
Shakabad carruurta ka ganacsata